Tun Tun's Photo Diary: 2017
at 4/17/2017 09:18:00 PM Links to this post 1 comment:
2017-Apr-06 ကဓါတ်ပုံရိုက်ထားတာ, Canada နိုင်ငံ Vancouver မြို. မှာ Sakura နဲ. Daffodil ပန်း တွေ ပွင့်နေပြီ။ Cherry နဲ. Tulip တွေကတော့ သိပ် မပွင့်သေးဘူး။ ပွင့်တဲ့ နေရာမှာလဲ ပွင့်နေပြီ။ မနှစ်ကလို ညီညီညာညာ မပွင့်ကြဘူး။ ဘာလို.လဲဆိုတော့ ဒီနှစ်က စံချိန်တင်လောက်အောင် မိုးများပြီး၊ ရာသီဥတုက အရမ်းအေးလို.ပါ။ ဆောင်းတွင်းတုန်းကလဲ နှင်းတွေ တော်တော်ကျခဲ့တယ်။ နွေဦးဝင်တာလဲ နောက်ကျတယ်။ အခုနွေဦးလို.သာ ပြောတယ် တော်တော်လေးကို ချမ်းတုန်းပဲ။ Temperature က ၁၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်အောက်မှာ ပဲရှိတယ်။ မိုးများပြီး ၊ နေသာတဲ့ ရက် နည်းတော့ ပန်းတွေ ပွင့်တာ နောက်ကျတယ်။ နောက်ပြီး မိုးရေကြောင့် တချို. အပင်တွေဆို အဖူးမှာတင် မိုးရေကြောင့် နွမ်းပြီး ကြွေကုန်တယ်။
at 4/08/2017 02:38:00 PM Links to this post 1 comment:
Labels: Canada, Cherry, Daffodil, Flower, Vancouver
at 2/07/2017 11:14:00 PM Links to this post No comments: